Ny momba ny fanontam-pirinty 3D - Fitaovana maimaim-poana | fitaovana maimaim-poana
Ny famokarana additive dia manana sehatra fampiharana bebe kokoa, na eo amin'ny sehatry ny fialam-boly na amin'ny indostria sy ny teknolojia. ny Ny fanontam-pirinty 3D dia ny ankehitriny, ary ny ho aviny dia toa mamiratra kokoa hamahana olana izay hatramin'izao dia tsy vitan'ny fomba fanamboarana mahazatra hafa. Ho fanampin'izay, tena fahitana ho an'ireo tia sy mpanamboatra DIY izany, ka tokony ho fantatrao ny momba azy ireo.
Amin'ity torolàlana ity dia afaka mianatra avy amin'ny tsotra indrindra ka hatramin'ny sarotra indrindra ianao. Tahaka ny vondrona voxel, mandalo ny antony maha mpanonta 3D azy sy ny fomba fiasany, ny tantarany kely, ny dingan'ny famolavolana ny maodely mandra-pivoakan'ny maodely, ny fandehanana amin'ny rindrambaiko ilaina, ny dingana amin'ny famokarana additive, ary ny azo ampiharina (indostria, fanabeazana, fialam-boly, zavakanto, fitsaboana,...).
STL sy endrika rakitra hafa
Fampahafantarana momba ny endrika STL ary ireo karazana endrika hafa ho an'ny maodely fanontam-pirinty, ary koa ny mety ho fiovam-po, ary ny rindrambaiko ilaina.
Karazana mpanonta printy 3D sy ny toetrany
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny toetra mampiavaka ny tsirairay amin'ireo karazana mpanonta printy 3D efa misy: teknolojia, tombony sy fatiantoka ho an'ny tsirairay, na ho an'ny fampiasana an-trano na ho an'ny fampiasana matihanina sy indostrialy, bioprinter, pensilihazo 3D, sns.
Ahoana ny fisafidianana mpanonta 3D
Rehefa mila misafidy ekipa vaovao ianao dia misy fisalasalana maro mipoitra, ary ato amin'ity torolàlana ity Ahoana ny fisafidianana mpanonta 3d afaka manala ny fisalasalanao ianao. Hianatra izay tokony ho raisinao mba hanao safidy tsara araka ny filanao manokana, ny tena toetra ara-teknika ny filamenta, resin, ary indostrialy 3D mpanonta printy, hafa 3D fanontam-pirinty, vidiny, ny fomba fametrahana ny mpanonta printy sy ny dingana voalohany. hanombohana fanontana.
Inona ny mpanonta printy 3D mora vidy
Tolo-kevitra sasany amin'ny marika sy modely amin'ny mpanonta printy 3D mora indrindra Inona no azonao mividy
Izay mpanonta printy 3D ho an'ny trano hividianana
Raha mitady zavatra ho an'ny trano manana endri-javatra tsara ianao, nefa tsy lafo, dia eto ianao ny tolo-kevitra tsara indrindra amin'ny mpanonta 3D ho an'ny mpanamboatra sy mpankafy fialamboly.
Inona no resin 3D mpanonta printy hividy
Ny sasany amin'ireo marika sy modely amin'ny mpanonta 3D resin tsara indrindra mba tsy ho diso hevitra ianao amin'ny safidy, ho an'ireo izay tsy ampy ny filament.
Raha toa ianao ka hampiasa azy io ho matihanina amin'ny fifandraisan-davitra na raha manana orinasa ianao ary mila mpanonta 3D indostrialy ianao, ireto ny sasany amin'ireo tsara indrindra.
Filaments ho an'ny mpanonta 3D sy resin
Tahaka ny amin'ny mpanonta mahazatra dia mila mividy cartridges sy toner ianao, amin'ny mpanonta 3D dia mila karazana hafa ianao. consumables, toy ny filaments sy resins. Ireto misy soso-kevitra vitsivitsy momba ireo vokatra ireo sy ireo fitaovana rehetra azonao atao pirinty.
Piesy ho an'ny mpanonta printy 3D + torolàlana momba ny fikojakojana sy fanamboarana
Find ny ampahany rehetra ilainao ho an'ny mpanonta 3D anao: fanohanana, fandriana, takelaka PEI, pasteur mafana, extruders, nozzles, fantsona PTFE, motera stepper, famatsiana herinaratra, fehikibo, pulleys, bearings, thermistors, coolant, lubricants, jiro, tanky resin, sy ny maro hafa. Ho fanampin'izay dia ho azonao atao koa ny mianatra ny fomba fikojakojana ny mpanonta 3D (calibration, fanadiovana,...) sy ny olana rehetra mety hitranga ary ny vahaolana.
Ireto ny sasany amin'ireo ny scanner 3d tsara indrindra izay azonao alaina amin'ny tetikasa matihanina na fialam-boly, mba hahafahanao manondrana sehatra na zavatra rehetra amin'ny endrika 3D nomerika mba hanontany azy amin'ny mpanonta 3D anao, hamerenana azy, sns. Azonao atao ihany koa ny mianatra ny toetran'ireo fitaovana ireo, ny karazany, ny fomba hifidianana izay mety aminao, sns.
ny 3D prints manana fitomboana eo amin'ny fiarahamonintsika ary tsy misy isalasalana fa ny Fanontana 3D miroborobo. Amin'ity sokajy ity sy amin'ny alàlan'ny lahatsoratray dia hanome anao vaovao mahaliana momba an'ity karazana mpanonta sy pirinty ity izahay, ohatra, hanapa-kevitra hoe iza no fitaovana hividianana na hianarana ny fampiasana azy. Raha mila fampahalalana momba ny fanontana 3D ianaoAtaovy mahazo aina ny tenanao satria nahatratra ny tranonkala tsara indrindra amin'ny tambajotra ianao hahazoana izany ary mianatra zavatra an-jatony koa.
ny Isaac hace 2 volana .
Raha mitady mpanonta printy 3D resin tsara ianao, ato amin'ity torolàlana ity dia hahita marika sy modely ary…
Mividiana scanner 3D: ny fomba hisafidianana ny tsara indrindra
Ho fanampin'ny fahafahanao mamolavola ho anao ny jeometrika amin'ilay sombin-javatra tianao hanonta amin'ny mpanonta 3D anao amin'ny alàlan'ny rindrambaiko,…
3D mpanonta kojakoja sy fanamboarana
Ny mpanonta printy 3D dia manana olana sy fahapotehana toy ny fitaovana hafa rehetra, noho izany dia tokony ho fantatrao ny fomba fikarakarana tsara ...
Toners sy ink cartridges no azo ampiasaina amin'ny mpanonta 2D, na izany aza, ny mpanonta 3D dia mila hafa…
Ny famokarana additive dia lasa iray amin'ireo loharanon-karena mampanantena indrindra amin'ny sehatry ny indostria. Ity karazana famokarana...
ny Isaac hace 3 volana .
Nasehonay teo aloha ny soso-kevitra momba ny mpanonta mora vidy, fa… ahoana raha mitady zavatra tsara kokoa ianao? Eny ary, amin'ity lahatsoratra hafa ity…
Octoprint: mitantana ny mpanonta 3D anao avy lavitra
Raha tianao ny fanontana 3D dia azo antoka fa ho tianao ny hahafantatra bebe kokoa momba ny tetikasa Octoprint. Lozisialy kaody...
Mihamaro ny marika sy karazana mpanonta printy 3D mora, ka mihasarotra ny misafidy...
Torolàlana farany: Ahoana ny fisafidianana mpanonta 3D
Rehefa mamely anao ny fisalasalana rehefa mividy, dia tsy misy tsara kokoa noho ny fahafantarana ireo toetra manan-danja indrindra sy…
Files STL: Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ity format ity sy ny safidy hafa
Raha niditra tamin'ny tontolon'ny fanontam-pirinty 3D ianao, dia azo antoka fa efa nahita izany tamin'ny toerana iray ianao…
ny Isaac hace 4 volana .
Ao amin'ny lahatsoratra teo aloha dia nanao karazana fampidirana ny tontolon'ny mpanonta 3D izahay. Anjaran’ny...
Tetikasa Hardware 5 maimaim-poana izay azonay atsangana miaraka amin'ny singa Lego
Tresdpro R1, mpanonta printy matihanina teraka tamin'ny Espaniôla
Izahay dia mamakafaka ny PLA 3D850 sy 3D870 avy amin'ilay mpanamboatra Espaniola Sakata3D
Izahay dia mamakafaka ireo filamenta hafahafa indrindra an'ny 3D material Smart
Ahoana ny fomba hanaovana haingana kokoa ny mpanonta 3D anao nefa tsy very ny kalitaon'ny pirinty
Nofakafakainay ny PLA CARBON avy amin'ny FFFWORLD, filamenta 10
Prusa i3 MK3, mpanonta pirinty vaovao avy amin'i Josef Prusa
Mamorona scanner 3D goavambe izy ireo noho ny Raspberry Pi
Akanjo ny Raspberry Pi anao amin'ireto tranga taloha ireto
Qlone, fampiharana scanner 3D maimaimpoana tanteraka
Fidget Spinner, kilalao azontsika atsangana
Manadihady ny filamentan'ny FFFworld izahay: malefaka, PETG, ABS, Metal ary PLA
Fanadihadiana momba ny mpanonta 3D Legio avy amin'ilay mpanamboatra Espaniola Leon 3D
Manaova milina lalao arcade anao noho ny fanontana 3D
Fanadihadiana sy fanandramana feno an'ny mpanonta BQ Witbox 3 2D
Mamorona mpanonta 3D misy mpanamboatra kafe taloha sy solaitrabe Arduino izy ireo
Amin'ity kojakoja Leon3D ity dia azonao atao ny manova ny mpanonta 3D anao ho mpanapaka sy mpanao sokitra